टिम बर्टन क्रिस्टिना रिक्कीलाई मोर्टिसियाको रूपमा 'एडम्स परिवार' मा फर्कन चाहन्छन्
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	टिम बर्टन क्रिस्टिना रिक्कीलाई मोर्टिसियाको रूपमा 'एडम्स परिवार' मा फर्कन चाहन्छन्
by ट्रे हिल्बर्न III अप्रिल 27, 2021
by ट्रे हिल्बर्न III अप्रिल 27, 2021 5,893 हेराइहरू
बाट रिपोर्टहरू इलुमिनेर्डी भनिरहेको छ कि टिम बर्टन नै कोरी र डरलाग्दो परिवारको ब्यारी Sonnenfeld को पुनरावृत्ति बाट बुधवार Addams को बारेमा छ ... यस पटक मोर्टिसिया Addams को रूप मा।
त्यो सहि छ। टिम बर्टन जो हाल नेटफ्लिक्सको काम गर्दैछ बुधवार, एउटा श्रृंखला जुन एड्म्स छोरीलाई विशेष रूपमा केन्द्रित गर्दछ, क्रिस्टिना रिक्चीलाई मोर्टिसिया एडम्सको रूपमा हेर्नु हो। के यसको मतलब रिचीले बुधवार एड्म्सको आमाको पुनरावृत्ति खेल्नेछ? हामी पक्कै पनि त्यस्तै आशा गर्दछौं।
बुर्टनको बुधवार नेडमोर एकेडेमीमा Addams छोरी र उनको समय मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। हामीले यो पनि पहिले रिपोर्ट गरेका थियौं कि उनले मानसिक क्षमताहरू प्रयोग गरी मकाब्रेको संसारमा अझ बढी खोज्ने छ।
रिक्सी अन्तिम पटक बुधबार एडम्स खेले Sonnenfeld's Addams परिवार '93 मा फिर्ता मानहरू। त्यसबेलादेखि उनी आफैंले चर्चा गरिनकी उनी त्यो भूमिकासँग कती रमाईलो गर्‍यो। तर, अब उनको भूमिकामा अभिनय गर्न असम्भव छ कि उहाँ वास्तवमै धेरै उमेरको हुनुहुन्छ। जे होस्, मोर्टिसियाको रूपमा उनलाई कास्टि solution्ग एक राम्रो समाधान जस्तो देखिन्छ उसलाई फिर्तामा ल्याउनका लागि। यो ती चीजहरू मध्ये एक हो जसले प्रशंसकहरूलाई उनीहरूको दिमागबाट हटाउनेछ, त्यसैले हामी आशा गरिरहेका छौं कि नेटफ्लिक्स र बुर्टनले यस चीजलाई बनाउन केही चालहरू गर्दछ।
के तपाई क्रिस्टिना रिक्चीलाई मोर्टिसिया एडम्सको रूपमा हेर्न चाहानुहुन्छ? हामीलाई टिप्पणी सेक्सन मा थाहा दिनुहोस्।
हम्प्टी डम्प्टी ट्रेलरको श्रापले परिकथालाई डराउँदछ। यहाँ जाँच गर्नुहोस्।